Ivive APK Download ho an'ny Android [Nohavaozina 2022] - Luso Gamer
Ivive APK Download ho an'ny Android [Nohavaozina 2022]
Jona 3, 2022 Febroary 14, 2022 by Shweta Tripathi
Nisy sary mbola nitondra revolisiona teo amin'ny fiainan'ny olombelona. Avy amin'ny fitehirizana ny tantara ho an'ny afisy mankany amin'ny marika fahatsiarovana mampahatsiahy sy mifaly amin'ny lasa. Fa i Ivive APK dia mandray io lalao io amin'ny ambaratonga vaovao rehetra.
Mitondra ny dikany samihafa ho an'ny olona samihafa ny sary sy ny sary. Na dia amin'ny olon-drehetra dia manome fomba fijery hafa izy ireo isaky ny mijery azy. Indraindray dia manampy antsika hanaja ny fahatsiarovan-tsika izy ireo, indraindray izy ireo no loharanom-baovao ho antsika, mitantara tantara, mizara fotoana ary mitondra ny lasa ho antsika izy ireo.
Noho izany, amin'izao vanim-potoanan'ny haitao artifolojika sy zava-misy lehibe izao dia mamela ireo antitra sy harena ireo ho lasa zavatra manalefaka. Raha te hanana ianao, alao fotsiny ny Ivive App amin'ny telefaona finday na tablette anao maimaimpoana amin'ity pejy ity.
Inona no atao hoe Ivive APK?
Ivive dia fitaovana manome endrika vaovao sy projection amin'ireo sary hitantsika. Manatanteraka an'ity hira ity izy ity amin'ny alàlan'ny fampiasana ny zava-misy. Izany dia miteraka fetra vaovao mahavariana amin'ny fahatsapana sy ny fahitana amin'ny sary, amin'ny alàlan'ny fampitandremana mahafinaritra.
Ka sao dia omeo aina ny sarinay. Isaky ny mijery azy ireo isika dia avelao izy ireo hitondra azy mihoatra lavitra noho ny eritreretintsika hampiasana ny atidohantsika. Rehefa mampiasa ny saintsika isika dia aleo manao ny marina, misy fetra io. Tsy isika rehetra akory no Picassos na Van Goghs.
Izay voalaza. Ka ahoana raha tsy azontsika an-tsaina toy ny mpanoratra Avatars na ny mpanakanto malaza. Azontsika atao ny mampiasa ny teknolojia mba hanaovana izany ho antsika.
Anaran'ny fonosana com.ivive
Android takiana 4.3 sy ambony
Ary raha efa zatra ny zava-misy ianao dia mety ho fantatrao ny fiantraikan'izany teo amin'ny fomba niainantsika sy ny fijerena an'izao tontolo izao.
Ny ivive App dia manana izany hery rehetra ilaina izany hametrahana ny famoronana amin'ny fomba ambaratonga mihoatra ny fahafahan'ny olombelona. Raha tsy fantatrao izay resakay. Zahao ny fampiharana anao amin'ny alàlan'ny fampiasana azy amin'ny fitaovana Android anao.
Manandrana ny tontolon'ny sary sy ny sary amin'ny fomba vaovao. Jereo izany amin'ny fihetsiketsehana sy hanahafana ny fiainana amin'ny fomba vaovao sy manaitra ary tsy ampoizina.
Vantany vao namorona sary mihetsika mahagaga ianao amin'ny sary tianao indrindra dia fotoana tokony hifampizarana amin'ny namanao na amin'ny media sosialy hanalaviranao ireo mpanaraka anao.
Ahoana no fomba hisintonana ny ivive APK?
Mba hahazoana ity rindran-tsary mahavariana amin'ny findainao ity dia araho fotsiny ny dingana manaraka.
Voalohany, mandehana any amin'ny rohy download io ary tsindrio ny barotra Download APK
Mankanesa any amin'ny fitahirizana ny fitaovana rehefa vita ny fizotran'ny fampidinana ary hikaroka ny rakitra.
Tsindrio eo mba hanombohana ny fametrahana
Ampifamadiho ny safidy tsy fantatra amin'ny finday
Mampetaho imbetsaka ary eo ianao.
Afaka mahita ny Ivive APK ao amin'ny efijery gadget ianao ary manomboka amin'ny bokotra hanokafana azy. Izao dia azonao atao ny manampy ny sary ary mahita ny majika. Ny zavatra iray marihina dia tsy hiasa amin'ireo sary rehetra. Ny fiasa dia voafetra amin'ny sary izay holazain'ny fampiharana anao amin'ny tsindry iray amin'ny kisary iray.
Zavatra mitovy aminao:
Ivive APK dia fomba mahaliana hitazana sary amin'ny fomba vaovao. Noho ny fanampian'ny zava-misy, dia manome traikefa vaovao mahavariana ianao. Ho mankafy ity fampiharana tokana ity miaraka am-perks feno dia alao fotsiny ny rakitra amin'ny fipihana ny rohy download ho an'ny Android.
Sokajy Entertainment, Apps Tags Ivive APK, Ivive App Post Fikarohana
Misintona Movidy Apk ho an'ny Android [Fialamboly 2022]
Technical King VM APK Download 2022 ho an'ny Android [PUBG Virtual]